Unogona Kuziva Kuti Kuridza Mimhanzi PaGitare - TMC App
Unogona Kuziva Kuti Kuridza Mimhanzi PaGitare
Paunoona kuridza mimhanzi pagitare ndicho chimwe chezvinhu zvinogutsa zvaunogona kudzidza. Paunenge wava neruzivo, inogona kushandiswa pazviitiko zvakasiyana uye inogona kushandiswa kuita mari. Ini ndichaedza kukuratidza mamwe matanho ekutanga ekudzidza kuridza mimhanzi pagitare, zvisinei zvinoda kushingirira uye kwakawanda kudzidzira.
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti hapana kutiza kuri nyore kwaunofanirwa kudzidzira kana kuti hauzonakisisa zvinhu zvawanyatso ziva. Nekuti ichasimbisa nekufamba kwenguva, edza kuti usatsamwe kana ikasauya kwauri ipapo.
Pane zvakasiyana siyana zvekutumira zvigadzirwa zvinopihwa mubhuku uye vhidhiyo fomu. Zvose izvi zvinowanikwa nyore nyore paInternet. Makirasi zvakare inzira huru yekuziva kuridza mimhanzi pagitare. Mumapeji mashoma ekutanga emabhuku mazhinji egitare pane nguva dzose kapfupi riff, uye nyore tune kuedza. Tanga navo uye dzidzira izvo kwechinguva kusvika waona zvakanaka kuti uenderere mberi.
Kana zviri zvekutenga gitare enda kuchitoro chemimhanzi wovasarudza wovabata kuti vaedze kusarudza imwe inonzwa kugadzikana uye kana uchiri kutadza kusarudza taura nemubatsiri wechitoro uone kana vaine chero anongedza uye matekiniki ekusarudza. gitare rakanaka. Usanyengerwa nemutengo mazhinji emagitare emutengo wakaderera zvakanaka kutanga nawo. Paunotanga kudzidza kuridza mimhanzi pagitare hauzoda gitare remhando yepamusoro sezvo mazhinji emabasa anozoenda asina kushandiswa uye anongovhara. Sezvo iwe uchiwedzera iwe ungashuva kuvandudza mumatanho madiki kuti aenderane neako ruzivo.
Makirasi uye zvidzidzo zvenharaunda
Kune akawanda akawanda emakirasi ekudzidza kuridza mimhanzi pagitare. Mamwe makirasi haabhadharwi kana anoda mupiro mudiki. Zvakadaro vazhinji vane muripo wakasungirirwa kubhadhara mutengo wevadzidzisi nemidziyo. Paunotora chikamu mukirasi yemahara, izvi zvinongonaka sekirasi inobhadharwa. Paunoona kuridza mimhanzi pagitare, makirasi ese anokubatsira iwe nezvakakosha. Chinhu chakanakisa nezvemakirasi maoko ari munzira yekuwana; hapana chinhu chiri nani pane kuve nemumwe munhu anokupa iwe yekutanga ruoko ruzivo rwekuita chimwe chinhu.
Dzidzira kugadzira zvakakwana
Iko hakuna chinhu chakadai sekudzidzira zvakanyanya paunosarudza kudzidza kuridza mimhanzi pagitare, asi iwe unoda kuparadzira tsika iyoyo kunze. Usazvipisire kusvika paunomira kunakidzwa nekutamba. Gara uchiyeuka kuti ndezvekuva nenguva yakanaka uye yechipiri iyo inomira kunakidzwa usazviita zvakare. Hapana chikonzero chekumanikidzira kuita chimwe chinhu chausingadi kuita.
Gara uchiyeuka kuti kana iwe ukaona kuridza mimhanzi o gitare hazvisi zvako chete ndezvekuti munhu wese afare nazvo saka usatya kugovera hunyanzvi hwako hutsva nemhuri yako neshamwari.
Paunoona kuridza mimhanzi pagitare ndicho chimwe chezvinhu zvinopa mubayiro zvaunogona kudzidza. Makirasi zvakare inzira inotyisa yekuziva kuridza mimhanzi pagitare. Kana zvasvika pakutenga gitare enda kuchitoro chemimhanzi wovasarudza wovabata edza kutora imwe inonzwa yakagadzikana uye kana iwe uchiri kutadza kusarudza taura nemubatsiri wechitoro uone kana vaine chero anongedza uye matekiniki ekusarudza. gitare rakanaka. Paunotanga kuziva kuridza mimhanzi pagitare hauzoda gitare rinoyevedza sezvo mazhinji maficha anozoenda asina kushandiswa uye anongopinda munzira. Ese makirasi anozokubatsira iwe nezvakakosha kana iwe ukaona kuridza mimhanzi pagitare.
Mari Yakadzoserwa Kiredhiti Kadhi: Ita Mari Kutenga Dai 14, 2022
Cash Back Credit Cards Deal Akawanda Mabhenefiti Dai 7, 2022
Unogona Kuwana Mari Nekukurumidza PaInternet April 30, 2022
Tinogona Kuita Mari Nekukurumidza Nekungotumira Mhando? April 23, 2022
UNODA MARI? Basa riri nyore kwauri muBalgözü köyü, Ita Ongororo, Wana MARI Nhasi April 16, 2022
Tora Mari (123)
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraSpymaster proMaitirwo ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraAyiwwmqzBhjkwuyv